Umkhuhlane vs. umkhuhlane: Qhathanisa izimbangela, izimpawu, ukwelashwa, nokuningi - Imfundo Yezempilo | Septhemba 2021
Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa Imidlalo Inkampani, Imfundo Yezempilo Umphakathi, Ukuphila Kahle Inkampani, Izindaba Izindaba, Wellness Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Imfundo Yezempilo, Izindaba Ezokuzijabulisa Inkampani, The Checkout Inkampani Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Umphakathi, Inkampani Imfundo Yezempilo
Main >> Imfundo Yezempilo >> Amakhaza vs. umkhuhlane: Uyini umehluko?
Amakhaza vs. umkhuhlane: Uyini umehluko?
Izimbangela zomkhuhlane nezomkhuhlane | Ukudlanga | Izimpawu | Ukuxilongwa | Ukwelashwa | Izici zobungozi | Ukuvimbela | Ukubonana nodokotela nini | Imibuzo evame ukubuzwa | Izinsizakusebenza
Uvula amehlo akho ekuseni okuthile; umphimbo wakho uyanwaya, ikhanda lakho libuhlungu, futhi yize usanda kuvuka, uzizwa ukhathele. Konke ofuna ukukwenza ukudonsa izembozo ngaphezulu kwekhanda lakho bese ubuyela ekulaleni. Uyazi ukuthi uma kubanda, cishe uzozizwa ungcono ezinsukwini ezimbalwa, kepha uma kuwumkhuhlane, kufanele ushayele udokotela wakho — phela imishanguzo isebenza kangcono kakhulu uma ungayithatha kungakapheli usuku noma ezimbili izimpawu. Kepha njengamanje, awuqiniseki ukuthi yini okufanele uyenze ngoba izimpawu zakho zilingana zombili.
Umkhuhlane ovamile nomkhuhlane (umkhuhlane) zombili izifo zokuphefumula. Yize kwesinye isikhathi kungaba nzima ukuhlukanisa, ngokuvamile, umkhuhlane ubucayi kakhulu. Kule ndatshana, sichaza izimpawu zomkhuhlane uma kuqhathaniswa nomkhuhlane, ukuthi yini ebangela lezi zifo ezibangelwa amagciwane, nokuthi uzobona nini udokotela.
Kukhona okungaphezulu kwe- Amagciwane angama-200 ahlukene lokho kubangela umkhuhlane ovamile; ama-rhinoviruses abangela u-50%. Amanye amagciwane adala imikhuhlane afaka phakathi igciwane lokuphefumula i-syncytial virus, i-human parainfluenza virus, i-adenovirus, ne-metapneumovirus yomuntu.
Eminye imikhuhlane ibangelwa izinhlobo zama-coronaviruses (njenge-229E, i-NL63, i-OC43 ne-HKU1), ngokusho kwe Izikhungo Zokulawulwa Nokuvikelwa Kwezifo (CDC), uhlobo olufanayo lwegciwane oludala i-COVID-19. Kepha i-COVID-19 yehlukile kulawa ma-coronaviruses ngoba ngokuvamile ibanga ukugula okunzima kakhulu, futhi yintsha ngokuphelele. Izimpawu ze-COVID-19 zifaka phakathi umkhuhlane, ukugodola, ukuqhaqhazela, ukulahlekelwa ukunambitheka noma iphunga, ukuphefumula okuncane, nohudo.
Imikhuhlane isakazeka kalula kwabanye ngamaconsi asemoyeni avela ngokukhwehlela noma ukuthimula komuntu onegciwane. La maconsi angahlala emoyeni noma ngabe ususukile endaweni. Lapho othile ehogela, angabamba amakhaza akho. Uma amaconsi ewela ngaphezulu, angaphila phezu kwawo futhi aqhubeke etheleleka kuwo amahora amaningana . Ukuthinta leyo ndawo bese uthinta ubuso bakho kungadlulisela igciwane kuwe. Yingakho kubalulekile ukugeza izandla njalo.
Abantu abaningi bacabanga ukuthi imikhuhlane idalwa ukuba semakhazeni, kanti cha. Imikhuhlane yenzeka kaningi ekwindla nasebusika. Isizathu esisodwa sokuthi igciwane lisabalale ngokushesha ezinyangeni ezibandayo yingoba abantu bachitha isikhathi esiningi endlini futhi basondelene kakhulu.
Yize kunamagciwane angamakhulu amaningana abanga imikhuhlane, munye kuphela obangela umkhuhlane: umkhuhlane. Umkhuhlane uphinde uhlukaniswe ngezigaba ezine ezihlukene: A, B, C, no D. Amagciwane omkhuhlane u-A no-B abangela ubhadane lwangezikhathi ezithile, kanti uhlobo A yilo lodwa olwaziwayo ukubangela ubhadane lwezifo. Uhlobo C lubangela izimpawu ezingezinhle, kanti uhlobo D lutholakala ikakhulukazi ezinkomeni.
Njengokubanda, igciwane lomkhuhlane lidluliselwa lisuka komunye umuntu liye komunye ukuhogela amaconsi emoyeni noma ukuthinta indawo umuntu onomkhuhlane asanda kuyingcolisa. Umkhuhlane ungasakazeka uqala ngosuku ngaphambi kokuba kuvele izimpawu futhi kuze kube yizinsuku eziyisikhombisa ngemuva kokuqala kwezimpawu.
OKUSHIWO: Umkhuhlane uthathelana isikhathi esingakanani?
Izimbangela zomkhuhlane nezomkhuhlane
Izimbangela Amagciwane angama-200 + angadala umkhuhlane ovamile; ama-rhinoviruses enza i-50% Izinhlobo ezine zegciwane lomkhuhlane (A, B, C, no-D)
Ukubhebhetheka Ukuhogela amaconsi emoyeni noma ukuthinta indawo esanda kuthintwa umuntu onegciwane Ukuhogela amaconsi emoyeni noma ukuthinta indawo esanda kuthintwa umuntu onegciwane
Igciwane elibandayo livame ukubizwa ngokuthi umkhuhlane ovamile ngoba, kuhle, kuvamile. Kukhona okungaphezulu kwe- Amacala ayi-1 billion wamakhaza e-United States unyaka nonyaka. Kubika ukuvakashelwa odokotela abaningi kunanoma iyiphi enye inkinga yezempilo futhi kuyisizathu esivame kakhulu sokulahleka esikoleni noma emsebenzini.
Abantu abadala bathola isilinganiso semikhuhlane emibili kuya kwemine ngonyaka, kanti izingane zithola isilinganiso semikhuhlane eyisithupha kuya kweziyisishiyagalombili ngonyaka, ngokusho I-American Lung Association .
Ngoba umkhuhlane akusona isifo esibikwayo, i-CDC ingalinganisa kuphela ukuthi bangaki abantu abathintekayo unyaka ngamunye e-United States. Bathuthukisa izilinganiso ezisuselwa kudatha evela ku- U.S. Ithonya Uhlelo Lokuqapha —Umzamo wokubambisana phakathi kweminyango yezempilo kahulumeni, yezwe neyasekhaya.
Inkathi yomkhuhlane, kusuka ngo-Okthoba kuze kube nguMeyi, yilapho abantu abaningi baba nomkhuhlane. Ngesikhathi kusuka ngo-Okthoba 2019 kuya ku-Ephreli 2020, i- i-CDC ukulinganisa:
Izigameko ezingama-39 kuye kweziyi-56 zomkhuhlane.
Ukuhambela kukadokotela okuyizigidi eziyi-18 kuya kwezingama-26 kwaba umphumela womkhuhlane.
Abantu abangu-410,000 kuya kwabangu-740,000 abanomkhuhlane badinga ukulaliswa esibhedlela.
Bangu-24 000 kuya ku-62 000 abantu abashone ngenxa yomkhuhlane noma ngenxa yezinkinga.
Ukwanda kwamakhaza kuqhathaniswa nomkhuhlane
Izigidigidi ezi-1 zamakhaza minyaka yonke e-United States
Izingane zithola imikhuhlane ephakathi kuka-6-8 ngonyaka
Abantu abadala bathola imikhuhlane ephakathi kuka-2-4 ngonyaka
Phakathi kwezigameko eziyizigidi ezingama-39-56 zomkhuhlane phakathi kuka-Okthoba 2019 no-Ephreli 2020
Izingane ziba nomkhuhlane ngokwesilinganiso njalo eminye iminyaka *
Abantu abadala (abangaphezu kweminyaka engama-30) baba nomkhuhlane cishe kanye eminyakeni emihlanu *
* Kususelwa ku Ucwaningo luphothulwe ngo-2015 ngumcwaningi oholayo uDkt Steven Riley
Izimpawu ezibandayo ezijwayelekile zivame ukuqala usuku olulodwa kuya kwezintathu ngemuva kokuchayeka kuleligciwane futhi kuvame ukuhlala izinsuku eziyisikhombisa kuya kwezingu-10 . Ungazizwa uvila, kepha umkhuhlane awunabungozi futhi uvame ukuphuma ngaphandle kokungenelela kwezokwelapha. Imithi ethengiswayo ithengisa ukuphatha izimpawu, ezibandakanya:
Impumu eminyene noma egijimayo (ukuphuma okujiyile okujiyile noma okuluhlaza)
Ukuklinyeka noma umphimbo obuhlungu
Umkhuhlane osezingeni eliphansi
Ukukhwehlela okuncane (okomile)
Imikhuhlane (ukutheleleka komgudu wokuphefumula) kwesinye isikhathi kungaholela ekuthelelekeni kwesibili, njengokutheleleka kwendlebe noma ukutheleleka nge-sinus.
Izimpawu zomkhuhlane zivame ukuba nzima kakhulu kunezomkhuhlane futhi zingahlala isonto elilodwa kuya kwamabili . Izimpawu zifaka:
Imfiva, ukuzwa umkhuhlane, noma ukubanda
Impumulo egijimayo noma egcwele
Abanye abantu bangahle babe nokuhlanza noma isifo sohudo, kepha lokhu kuvame kakhulu ezinganeni.
Umkhuhlane ungaholela ezinkingeni ezilinganiselayo ezifana nesinus noma ukutheleleka kwezindlebe. I-pneumonia nayo iyinkinga yenkinga yomkhuhlane, engasongela impilo. Abantu abanezimo zezempilo ezingaphansi bangabhekana nezinkinga ezivela emkhuhlane.
Izimpawu zomkhuhlane nezomkhuhlane
Umkhuhlane ophansi noma ongenawo
Impumu eminyene noma egijimayo
Ukukhwehlela okumnene, nokugenca
Ubuhlungu obuncane nezinhlungu
Ungazizwa uvila noma ube nomuzwa ojwayelekile wokungaphili
Khwehlela, kwesinye isikhathi kube nzima
Ubuhlungu bomzimba nezinhlungu
Amasonto amaningana okukhathala
Imikhuhlane itholakala ngokuya ngezimpawu zakho. Ngoba ezinye izimo, ezinjengokutheleleka ngamagciwane, ukungezwani komzimba, umkhuhlane, zingaba nezimpawu ezifanayo, kwesinye isikhathi kutholakala ngokususa ezinye izimo. Kunezivivinyo ezikhethekile ezingakhomba idlanzana lamagciwane ajwayelekile abanga umkhuhlane ovamile, kepha lokhu kuvame ukubekelwa iziguli ezigula kakhulu.
Umkhuhlane ungatholakala futhi ngokususelwa kwizimpawu; kodwa-ke kunezivivinyo zaselabhorethri ukutshela ukuthi unawo yini umkhuhlane. Lokhu kuhlolwa kunembe kakhudlwana lapho kuthathwe ezinsukwini ezimbalwa zokuqala zezimpawu. Ngakho-ke, uma ucabanga ukuthi unomkhuhlane, kufanele uxhumane nodokotela wakho ngokushesha.
Ukuxilongwa kwamakhaza kuqhathaniswa nomkhuhlane
Ukuxilongwa kususelwa kwizimpawu noma ekususweni kwezinye izimo zezokwelapha Kutholwe kususelwa ekuhlolweni kwelabhorethri, okungcono kungakapheli izinsuku ezi-2 ngemuva kokuvela kwezimpawu
Alikho ikhambi lomkhuhlane ovamile; kodwa-ke, imishanguzo yamakhasimende iyanciphisa izimpawu ezibandayo. Lokhu kufaka phakathi:
Ama-decongestants ( Udidekile, I-Advil Multi-Symptom Cold & Flu,I-Mucinex, Sinex)
Ama-antihistamine (iDimetane, iChlor-Trimeton, iTavist)
Umuthi wokukhwehlela(UDelsym,URobitussin, I-Mucinex)
Ukudambisa izinhlungu ( UTylenol , Advil, I-Aleve)
Futhi, kufanele uphumule futhi wandise ukungena koketshezi. Ungakuthola futhi kuwusizo ukugoqa ngamanzi anosawoti, usebenzise i-petroleum jelly esikhumbeni esiluhlaza noma esimile, bese usebenzisa umusi ofudumele ukunciphisa isiminyaminya.
Ama-antibiotic awasebenzi ngoba amagciwane, hhayi izifo ezibangelwa amagciwane, abangela imikhuhlane.
Ukuqapha ngenkathi welapha umkhuhlane:
Akufanele unikeze i-aspirin enganeni enomkhuhlane, njengoba ihlotshaniswa nayo Isifo sikaReye , okungaba isifo esibi noma esibulalayo.
Ngenkathi umkhuhlane ungavamisile ukuba yingozi kwabesifazane abakhulelwe, eminye imishanguzo engathengiswa kungaba yingozi ngesikhathi ukhulelwe. Kufanele ukhulume nodokotela wakho uma unomkhuhlane, njengoba imfiva ngesikhathi sokukhulelwa kwasekuqaleni ingadala ukukhubazeka kokuzalwa, ngokusho kweCleveland Clinic.
Uma uphethwe umkhuhlane, kuyalulekwa ukuthi uhlale ekhaya, uthole ukuphumula okuningi, wandise uketshezi lwakho, uphuze nemithi yokuthenga ekhawuntareni ukudambisa ukungaphatheki kahle. Kukhona nemithi elwa namagciwane emine enconywe yi-CDC futhi yamukelwa yi-FDA ekwelapheni umkhuhlane: iTamiflu, iRapivab, iRelenza, neXofluza. UXofluza naye manje kuvunyelwe ukuvimbela umkhuhlane ngemuva kokuchayeka kuleligciwane.
Kufanele uxoxe nganoma yiziphi izimo zezokwelapha ezikhona nodokotela wakho ngaphambi kokuthatha le mithi. I-Relenza ayinconywa kubantu abanezifo zamaphaphu, futhi i-Xofluza ayinconyelwe abesifazane abakhulelwe noma labo abancelisayo.
OKUSHIWO: Ingabe umkhuhlane udutshulwe noma iTamiflu ivimbela i-COVID-19?
Ukwelashwa okubandayo nokuphikisana nomkhuhlane
I-Advil Multi-Symptom Cold & Flu
Imithi yokukhwehlela ye-OTC:
Ukuphumula kobuhlungu be-OTC:
Ngezimpawu zomkhuhlane omncane, imithi ye-OTC yemikhuhlane ingasiza
Imithi kadokotela yokulwa namagciwane:
Wonke umuntu usengozini yokungenwa umkhuhlane. Izingane zivame ukungenwa imikhuhlane kaningi ngoba amasosha azo omzimba akakakhuli, okusho ukuthi ukutholakala kwawo kumagciwane kunqunyelwe. Ngoba bachitha isikhathi esiseduze nezinye izingane enkulisa noma esikoleni, banamathuba amaningi okuthola amagciwane abandayo. Njengoba amasosha abo omzimba efunda ukubona amagciwane abandayo, aqala ukuhlasela amagciwane afanayo, yingakho inani lemikhuhlane lincipha njengoba ukhula, ngokusho UJohn Hopkins Medicine .
Umkhuhlane uvame kakhulu phakathi nezinyanga zokwindla nezasebusika ngoba abantu bachitha isikhathi esithe xaxa endlini lapho amagciwane abandayo engahlala khona emoyeni nasezindaweni ezisemakhazeni. Umkhathi nawo uya woma ngalezi zinyanga, futhi ukungabi khona komswakama kungasomisa izindima zamakhala, kuzenze zithathe kalula amagciwane abandayo, ngokusho kukaJohn Hopkins Medicine.
Wonke umuntu naye usengozini yokuthola umkhuhlane. Ezinye izifo zingakhuphula ingozi yokuba nezinkinga zomkhuhlane ezinzima. Lokhu kufaka phakathi:
Izifo ezingalapheki zamaphaphu ezifana nesifuba somoya, i-COPD, i-bronchiectasis, i-cystic fibrosis
Isifo sezinso esingalapheki
Ukuphazamiseka komzimba, njenge-HIV / AIDs
Ukwelashwa kwamanje okucindezela amasosha omzimba
Izingane nentsha ethola ukwelashwa i-aspirin yesikhathi eside
Izimo ezibangela umkhuhlane nezomkhuhlane
Wonke umuntu osengozini
Izingane zithambekele kalula kumagciwane abandayo
Abantu abanezimo zezokwelapha ezingalapheki bangaba sengozini yokuthola izinkinga zomkhuhlane ezinzima
Awukho umuthi wokugoma ozokuvimbela ekutholeni umkhuhlane noma ikhambi uma uwuthola, kodwa kunezinyathelo ongazithatha ukunciphisa ubungozi bakho:
Geza kahle izandla zakho usebenzisa insipho namanzi njalo. Ngemuva kokufaka insipho, gcoba izandla zakho ngamandla imizuzwana engama-20 ngaphansi kwamanzi afudumele.
Uma insipho namanzi kungatholakali, sebenzisa i-sanitizer yezandla enotshwala.
Gwema ukusondelana nabantu abanomkhuhlane.
Zama ukungabuthinti ubuso bakho, ikakhulukazi ikhala namehlo, lapho useduze kwabantu abanomkhuhlane uze ugeze izandla zakho.
Indlela engcono yokuvimbela ukusabalalisa umkhuhlane kwabanye abantu ukuhlala ekhaya uma ugula. Uma kufanele uphume, gwema ukuxhumana okuseduze nabanye abantu futhi uyeke ukugona, ukuqabulana, noma ukuxhawulana. Sebenza ngenkuthalo ukunciphisa ukwabelana ngamagciwane abandayo nabanye ngokukhwehlela noma uthimule ezicutshini zobuso, bese ulahla izicubu ngokushesha. Ngemuva kokukhwehlela noma ukuthimula, geza izandla zakho kahle ukugwema ukuthinta izinto nokushiya amagciwane ngemuva. Ama-Rhinoviruses angaphila kuze kufike emahoreni amathathu ezindaweni, ngokusho kukaJohn Hopkins Medicine.Sebenzisa izibulala-magciwane ezibulala amagciwane ukuhlanza indawo.
Indlela engcono yokuvimbela ukuthola umkhuhlane ukuthola umuthi wokugomela umkhuhlane waminyaka yonke. Ukusebenza komuthi wokugoma kuyahlukahluka unyaka nonyaka, ngokwengxenye, ukuthi kufana kanjani kahle nomkhuhlane wamanje ojikelezayo. Kodwa-ke, ngokuvamile kunciphisa ithuba lakho lokuthola umkhuhlane 40% kuya ku-60% , Ngokwe-CDC. Noma kungaqedi amathuba okuthola umkhuhlane, kuvimbela izigidi zamacala omkhuhlane unyaka nonyaka. Ukuthola umuthi wokugomela umkhuhlane nakho kunganciphisa ukuqina komkhuhlane uma uwuthola.
Ukuzinakekela, kufaka phakathi ukugeza izandla kaningi nokugwema ukuxhumana okuseduze nabanye abagulayo, nakho kunganciphisa ubungozi bokuthola umkhuhlane.
Ungawuvikela kanjani umkhuhlane uma kuqhathaniswa nomkhuhlane
Ukugeza izandla kaningi, noma ukusebenzisa i-sanitizer yezandla uma insipho namanzi kungatholakali
Ukugwema ukuxhumana okuseduze nabantu abanemikhuhlane
Ukungabuthinti ubuso bakho lapho useduze kwabantu abanomkhuhlane
Ukuhlanzeka kuvela nge-disinfectant ebulala amagciwane
Ukuthola umkhuhlane wonyaka nokukhuthaza wonke umuntu wasekhaya ukuba athole umkhuhlane
Ukugwema ukuxhumana okuseduze nabantu abanomkhuhlane noma umkhuhlane
Ukungabuthinti ubuso bakho lapho useduze kwabantu abanomkhuhlane noma umkhuhlane
Isikhathi esiningi, awudingi ukunakekelwa kwezokwelashwa kumkhuhlane. Imithi ethengiswa ngaphandle kwamanani inganciphisa izimpawu futhi ikwenze ukhululeke kakhudlwana. Kodwa-ke, kunezikhathi lapho kufanele ubone umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ngomkhuhlane:
Uma izimpawu zakho zingapheli zingakapheli izinsuku eziyi-10.
Uma uthuthukisa izimpawu ezintsha.
Uma ingane engaphansi kwezinyanga ezintathu ubudala iba nomkhuhlane.
Isikhathi esihle sokubona udokotela wakho womkhuhlane ukuthola umkhuhlane wakho wonyaka ngaphambi kokuba uwuthole. Uma uthola umkhuhlane, kufanele uxhumane nodokotela wakho ngosuku lokuqala noma ezimbili. Kunemithi elwa namagciwane engasiza ukunciphisa ukuqina nobude bezimpawu, kepha isebenza kahle kakhulu uma ithathwa ezinsukwini ezimbalwa zokuqala.
Kufanele futhi uxhumane nomhlinzeki wakho wezokwelapha uma:
Unenkinga yokuphefumula, uzwa ubuhlungu besifuba, noma ukhwehlela isikhwehlela esiphuzi, esiluhlaza noma esinegazi, ngokusho kwe-American Lung Association.
Ukukhwehlela kwakho akupheli noma kukuvimbela ukuba ulale.
Unobungozi obukhulu bezinkinga, njengezingane ezincane ezingaphansi kweminyaka emihlanu ubudala, abantu abangaphezu kweminyaka engama-65 ubudala, abesifazane abakhulelwe, kanye nabantu abanezimo ezithile zezokwelapha ezifana nesifuba somoya, isifo sikashukela nesifo senhliziyo.
Uma uhlangabezana nezimpawu ezinzima, kufanele ufune usizo lwezokwelapha.
Izimpawu ezinzima ezinganeni zifaka:
Umkhuhlane ophezulu (ngaphezu kuka-104 ° F)
Ezinganeni ezingaphansi kwamasonto ayi-12 ubudala, noma imuphi umkhuhlane
Umkhuhlane ohlala izinsuku ezingaphezu kwezintathu
Ukuphefumula okunenkinga, ukuphefumula okusheshayo, noma ukuphefumula
Izimbambo zidonsela ngaphakathi ngokuphefumula ngakunye
Umbala wesikhumba o-Bluish (izindebe, ubuso)
Ukudonsa izindlebe noma izindlebe
Kunzima ukuvuka, hhayi ukuqapha
Izimpawu ezithuthukayo bese zibuya nomkhuhlane noma ukukhwehlela okubi kakhulu
Ukuqiniswa kwezimo zezokwelapha ezingapheli (njengesifo sikashukela noma isifo senhliziyo)
Ukuhlanza noma ubuhlungu besisu
Izimpawu ezinzima kubantu abadala zifaka:
Umkhuhlane ophakeme, ode isikhathi eside (ngaphezu kuka-102 ° F) ngokukhathala nobuhlungu bomzimba
Izimpawu ezihlala isikhathi eside kunezinsuku eziyi-10 noma ziba zimbi kakhulu
Ukuphefumula kanzima noma ukuphefumula okuncane
Ubuhlungu besifuba noma ingcindezi
Ukuquleka noma uzizwe sengathi uzoquleka
Ukudideka noma ukudideka
Ukuhlanza okukhulu noma okuphikelelayo
Ubuhlungu obukhulu besono ebusweni bakho noma ebunzini
Izindlala ezivuvukile entanyeni noma emhlathini
Imibuzo ebuzwa njalo mayelana namakhaza nomkhuhlane
Ungawubona kanjani umehluko phakathi komkhuhlane nomkhuhlane?
Ngoba babelana ngezimpawu eziningi ezifanayo, kungaba yinselele ukwazi umehluko phakathi kwalezi zifo zokuphefumula ngokususelwa kuzimpawu zodwa. Okokuqala, kunokuhlolwa kwelabhorethri ukubona ukuthi unawo yini umkhuhlane, onembe kakhulu ezinsukwini ezimbalwa zezimpawu ezivele okokuqala. Izimpawu ezibandayo ngokuvamile ziba mncane futhi zihambe kancane, zihlala izinsuku eziyisikhombisa kuya kweziyi-10. Izimpawu zomkhuhlane zinzima kakhulu futhi ngokuzumayo, zihlala isonto elilodwa kuya kwamabili.
Ziyini izimpawu zomkhuhlane uma kuqhathaniswa nezimpawu zomkhuhlane?
Umehluko omkhulu phakathi komkhuhlane nomkhuhlane ukuthi kungenzeka ukuthi ube nomkhuhlane kanti amakhaza anomkhuhlane futhi izimpawu ziba nzima kakhulu. Eminye umehluko ongaba khona:
i-keflex ingasetshenziselwa ukutheleleka nge-sinus
Umkhuhlane nokugodla kuvamile ngomkhuhlane kodwa hhayi ngomkhuhlane.
Ukuthimula kulindelwe umkhuhlane kepha akuvamile ukuhambisana nomkhuhlane.
Amakhala okugijimayo nokuxineneyo ajwayelekile emkhuhlaneni kunasemkhuhlaneni.
Ukuphathwa ikhanda kuvamile ngomkhuhlane kodwa akuhlobene neze nomkhuhlane.
Yini eyingozi kakhulu: isifo se-coronavirus noma umkhuhlane wonyaka?
Ubunzima be- Izimpawu ze-COVID-19 nezomkhuhlane womabili athathwa njengomnene kuye kokubi, futhi amaqembu afanayo athathwa njengengozi enkulu yezimpawu ezinzima kanye / noma nezinkinga ngazo zombili lezi zifo. Kusukela ngo-Okthoba 2020, i- i-CDC ibika amacala angaphezu kwe-7.5 wezigidi ze-coronavirus kanye ne-200,000 yokufa okuhlobene ne-coronavirus ngo-2020 kanti imininingwane yokuqala ilinganiselwa ezigidini ezingama-56 izifo zomkhuhlane kanye nokufa okuhlobene nomkhuhlane okungu-62,000 kwenkathi yomkhuhlane ka-2019-2020.
Kungenzeka yini ukuba nomkhuhlane kanye ne-COVID-19 ngasikhathi sinye?
Ungaba nomkhuhlane kanye ne-COVID-19 ngasikhathi sinye, ngokusho kwe- i-CDC . Ochwepheshe abaningi bezempilo bakhathazeka ngokuthi i-U.S. Izobhekana nobhadane lwezifo ezimbili ngasikhathi sinye, ngokusho kuka IScientific American Magazine , engakwazi ukwelula uhlelo lwethu lokunakekelwa kwezempilo ngaphezu kwalokho olube nge-COVID. Kungenzeka ukuthi imizamo yokunciphisa, njengokunciphisa isikhathi endlini nabanye abangaphandle kwamalungu omndeni wakho, ukugqoka izifihla-buso, ukuziqhelelanisa nomphakathi, nokwanda kokugeza izandla, kungehlisa inani labantu abathola umkhuhlane.
Umkhuhlane ovamile: Zivikele wena nabanye , I-CDC
Izimpawu zomkhuhlane nezinkinga , I-CDC
Umkhuhlane ovamile , Umtholampilo waseCleveland
Ama-coronaviruses womuntu avamile , I-CDC
Amagciwane omkhuhlane nomkhuhlane: Angahlala isikhathi esingakanani ngaphandle komzimba? Umtholampilo waseMayo
Umkhuhlane ovamile , IMedlinePlus
Amaqiniso ngomkhuhlane ovamile , I-American Lung Association
Uhlelo lokuqapha umkhuhlane , I-CDC
Isikhathi se-2019-2020 semfuluwenza yase-U.S. Izilinganiso zomthwalo wangaphambi kwesikhathi sonyaka , I-CDC
Kulinganiselwa inkambo yokuphila yomkhuhlane A (H3N2) izimpendulo zamasosha omzimba ezivela emininingwaneni enqamulelayo , PLOS Biology
Umkhuhlane ovamile , EJohns Hopkins University
I-COVID data tracker , I-CDC
Ama-FAQ e-Coronavirus , I-CDC
ICoronavirus nomkhuhlane: Ukusongela okuphindwe kabili , IScientific American
Ingabe i-ketamine 'isidakamizwa sokudangala okuyisimangaliso'?
I-FDA ivuma kuqala i-Eliquis generic: apixaban
ingabe i-l-theanine ivela ekuhlolweni kwezidakamizwa
yini engenzeka uma i-potassium yakho iphansi
ulinyusa kanjani izinga lakho le-creatinine?
ongakusebenzisela ukutheleleka kwemvubelo
yini ebangela i-positive positive ye-thc